Taranka, Caawinta, iyo Eyda Ey Dhalay - Caafimaadka Eyga
Taranka, Caawinta, iyo Eyda Ey Dhalay
Kahor Akhrinta Dheeraad ah:
Kahor intaadan tarmin qashinkaaga, fadlan la tasho dhakhtar xoolaha. Macluumaadka ku jira Su'aalahan Su'aalaha la Weydiinayo waa in aan sinnaba loogu macneeyn karin bedelka daryeelka caafimaadka xoolaha iyo talo. Dheeraad ah, waa inaad ku dadaashaa inaad hesho dhakhtar xoolaha ah oo aqoon u leh arrimaha xiiqda canine. Sababtoo ah dad aad u tiro badan ayaa mas'uul ka ah oo kicinaaya qaniinyadooda, dhakhaatiirta yar ee xoolaha ayaa ku raaxeysanaya eeyo yaryar oo xaydha ah.
Waxaa la yaab leh, dhakhaatiirta caafimaadka degdegga ah ee xoolaha waxay u badan tahay inay yaqaanaan arrimaha xiiqda. Tani shaki kuma jiro sababta oo ah waxa loo yaqaan 'maxim' ee ah, in la doorbido, eeyadu way cabaadayaan 2-da subaxnimo marka xarumaha caafimaadka xoolaha ee caadiga ah la xidho. Mar labaad, fadlan la tasho dhakhtar xoolaha ka hor intaadan samayn wax taran ah. Sida dadka oo kale, daryeelka ka horreeya umusha ayaa muhiim ugu ah bitch.
Haddii aad ka walwalsan tahay qaniinkaaga neefsashada, FADLAN ha iigu soo dirin calaamadaha iyo su'aalaha. Marka hore, anigu ma ihi dhakhtar xoolaha ah sidaa darteedna uma qalmo inaan ka jawaabo. Ta labaad, anigu diyaar uma ihi 24/7 si aan uga jawaabo su'aalaha.
Marka neefta la neefsanayo, astaamaha walaaca waa inuu dhakhtar xoolaha ka hadlaa sida ugu dhakhsaha badan. Haddii aad wax iga qorto xaalad deg-deg ah ama xaalad deg-deg ah oo suurtagal ah, waxaan kuu ballan qaadayaa kaliya inaan kuu sheegi doono waa inaan waco dhakhtarka xoolaha.
Su'aalahaan la isweydiiyo waxaa loo qoray dadka qorsheynaya qashin eeyo ah. Waxaan garwaaqsanahay inay jiraan dad badan oo isku arkaa qaniinyo uur leh markay taasi ahayn wixii ay doonayeen. Su'aalahan la Weydiinayo Su'aalaha ayaa wali kugula yeelan doona macluumaad aad u tiro badan adiga. Haddii aad xaaladdaas ku sugan tahay, fadlan qaniinyada ha kuu baaro dhakhtar xoolaha sida ugu dhakhsaha badan.
Haddii aysan helin daryeel caafimaad oo umul ah kahor - sida fiitamiinnada, cuntada, iyo jimicsiga - waxay si fiican u lahaan doontaa dhibaatooyin lama filaan ah markii ay sanqadhyo iyo / ama korinayaan eeyahaas.
Doorashada Eyga Cunnada
Diyaarinta Qalabkaaga Caawinta
Waqtiga Korinta Eeyaha
Raadinta Iyo La Macaamilida Eeyaha Iibsada
Dammaanad Qaadka Caafimaadka
Taranka cunuggu waa hawl ay tahay in si dhab ah oo dhab ah loo qaato. Waxaad soosaaraysaa nolol ikhtiyaarkaaga ah sababo kala duwan awgood. Qaar ka mid ah sababahaasi waxay noqon doonaan kuwo wanaagsan, qaarna ma noqon doonaan. Laakiin go'aankan waa in laga fikiraa si aad iyo aad u taxaddar leh.
Ka hor intaadan sii akhrin, fadlan akhri Tarankaaga Eygaaga Su'aalaha Badanaa La Weydiiyo. Sidoo kale, dukumiintigaan waa in loo qaataa oo kaliya bar bilow. Haddii ka dib markaad aqriso dukumintigan, wali aad rabto inaad soocdo qaniinyadaada, waxaan si xoogan kuugu soo jeedinayaa inaad hesho oo aad aqriso ugu yaraan qaar ka mid ah buugaagta ku taxan qeybta kheyraadka.
Dheeraad ah, waxaan kugula talinayaa inaad la tashato brech your brecher si aad uga hagto arintaan. Eeyaha waa in lagu dhaqaa hal sabab iyo hal sabab oo kaliya: Si loo wanaajiyo taranka. Haddii aad tan u akhrinaysid adoo ujeedo ka leh taranka si aad dhaqso dhaqso ah u sameyso, carruurta wax u barato, ama aad u fuliso baahidaada dheddig ee qaayaha ah, fadlan ha ubixin eeygaaga!
Dhab ahaan, sida aad u baran doonto markaad wax u akhrido, si sax ah loo sameeyo, taranta si dhif ah waa lacag-sameeye; waxay u badan tahay lacag daadinta! Carruurtu waxay wax ka baran karaan si ka dhammaystiran sidaad ugu talo gashay markii wax khaldamaan xagga taranka. Luminta qashinka iyo eeyoheeda oo dhan malaha maahan casharkii aad ugu talagashay laakiin si joogto ah ayey u dhacdaa.
Iyo, dabcan, tan ugu dambeysa, bitchiyada badankood waxay runtii rabaan inay noqdaan saaxiibkaaga aad jeceshahay 24 saacadood maalintii, markaa hadaad runti rabto inaad eeygaaga ka dhigto mid faraxsan, iyada kufsada oo waqti badan la qaata iyada! Laakiin, haddii aad go'aansato inaad sii socoto, markaa fadlan si buuxda u aqri Su'aalahan. Waxay daboolaysaa taranka mas'uulka ka ah eeyaha si ay u soo saaraan eeyo tayo leh oo ay u siiyaan bilowga ugu fiican nolosha.
Haddii aad leedahay eey uur leedahay hadda, fadlan ha u isticmaalin su'aalahan inta badan la isweydiiyo sida ilahaaga keliya ee macluumaadka laga helo. Ka raadi dhakhtar takhasus leh caafimaadka xoolaha deegaankaaga si uu kaaga caawiyo xuub siinta eeyaha.
Macluumaadka ku jira Su'aalahan waxaa lagu helay khibradeyda gaarka ah, cilmi baaris suugaaneed iyo aniga oo la hadlaya kuwa aqoonta yaqaan. Mahadcelin badan ayaa iska leh Vicki Blodgett iyo Terri Herigstad sida ay diyaarka ugu yihiin inay la wadaagaan khibradooda adag. Sidoo kale, waxaan jeclaan lahaa inaan uga mahadceliyo Cindy Moore taageeradeeda mashruucayga keli ah ee FAQ.
Maxaan ubaahanahay inaan sameeyo kahor intaanan cunin qashinkeyga?
Runtii tani waa laba su'aalood. Maxaan sameeyaa ka hor intaanan go'aansan inaan cunno qashinkeyga, ka dibna, marka go'aankaas la gaaro, maxaan sameeyaa marka xigta.
Hagaag, maxaan sameeyaa ka hor intaanan go'aansan in aan cuno qashinkeyga?
Kahor intaadan abuurin eey, waxaad u baahan tahay inaad go'aan ka gaarto in eeygu uu yahay musharrax ku habboon taranka iyo in kale.
Ugu horreyntii, qaniinyo-yaraanta waa in aan la dhalan-rogin ka hor da'da 2. Iyagu weli ma ahan kuwo jir ahaan u bislaaday weli. U oggolow inay koraan oo ay horumariyaan ka hor intaanay u gudbin culeyska jireed ee taranka, qaadista, iyo xiiqda eeyo yaryar. Tani maahan inay dhibaato dhacdo, hase yeeshe, maxaa yeelay waxaad mashquul badan doontaa labadaas sano.
Eygaaga ayaa isu diyaarin doona taranka labada sano ee ugu horreeya nolosheeda. Wax kasta oo aad u sameyso iyada, oo ay ku jiraan bixinta nafaqo iyo daryeel caafimaad oo tayo leh, tababar addeecid, tusid, shaqo, iyo kalgacal ayaa ka dhigi doonta iyada hooyo fiican waxayna ka caawin doontaa inay soo saarto xashiish caafimaad qaba.
Waan arki karaa sababta nafaqada iyo daryeelka caafimaad ay u yihiin walaacyo muhiim ah, laakiin sidee waxyaalahaas kale uga dhigaan iyada ciyaal wanaagsan?
Dhammaantood siyaabo kala duwan ayey muhiim ugu yihiin. Tan ugu muhiimsan ayaa laga yaabaa inay tahay tii ugu dambeysay. Uurka, dhalmada, iyo barbaarinta cunugga ayaa walaac weyn ku haya eeyga oo ogaanshaha inaad jeceshahay iyada runti waxay ka dhigeysaa shaqo fudud.
Hal shay, waxay kugu kalsoonaan doontaa inaad ka caawiso eeyaha, halkii aad ka dareemi lahayd inay u baahan tahay inay difaacdo. Tababbarka adeeciddu wuxuu ku yimaadaa ciyaaro siyaabaha ugu xiisaha badan. Mararka qaar haweeneyda ayaa walwal xad dhaaf ah dareemi doonta marka eeydeeda cusubi ay bilaabaan inay ooyaan: awood u siinta inay hoos u dhigto si ay iyadu ugu siiso iyaga fursad ay ku helaan waxa ay rabaan (cunno!) Waxay ku siin doontaa degganaan weyn oo maskaxeed. Kuwani waa tusaalooyin yar oo ah sababta dhammaan diyaarintani muhiim u tahay.
Hagaag, laakiin ka waran muujinta iyo shaqeynta, sidee kuwaasi saameyn ugu yeelan karaan astaamaheeda sida gabar cows ah?
Waxaa jira laba sababood oo ah in ciyaal gurijoog ahi ay 'uga baxaan guriga.'
Ugu horreyntii, waxay noqon doontaa eey faraxsan haddii ay waxqabadyo ku leedahay nolosheeda oo ay meelo kuu raacdo oo aad waxyaalo baashaal ah samayso. Haddii ay faraxsan tahay, waxay noqon doontaa hooyo ka wanaagsan. Waa wax fudud.
Marka labaad, waxaad u baahan tahay inaad hesho hab aad ku ogaan karto in qashinku u qalmo taranka. Taasi waxay u egtahay mid xukun leh, laakiin waxaan ku xusuusin doonaa inaan halkaan ku falanqeyneyno taranka mas'uuliyadda. Taasi waxay ka dhigan tahay inaan u tarmaynay si aan si fiican u soocno.
Habka ugu fiican ee lagu xaqiijin karo inaad hagaajineyso taranka waa inaad kaliya u xoojiso xoolaha tayada leh xayawaannada kale ee tayada leh isha si loo yareeyo cilladaha loona xoojiyo tayada wanaagsan. Waxaan ka wada hadli doonnaa waxyaabo badan oo ku saabsan doorashada eyda haraaga ah goor dambe, hase yeeshe, waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad doorato qoob-ka-ciyaarkaaga cidlada ah. Haddii aad bilaabayso eeygaaga ugu horreeya, waxaad u baahan doontaa inaad dherer iyo ad adag ku eegtid iyada oo aad go'aansato haddii ay u qalanto taranka. Tani wax xiriir ah kuma lahan inta aad jeceshahay iyada - sida iska cad, adigu waad sameysaa - tani waxay la xiriirtaa hagaajinta taranka.
Tani waxay noqon kartaa go'aan adag oo la sameeyo marka qalbigaagu ku lug leeyahay. Quluubtu waxay u muuqdaan inay diiran yihiin aragtideena si khaladaadka loo yareeyo oo tayada wanaagsan loo wanaajiyo. Tani waa halka ay ka bilaabatay fikradda ah tusidda iyo tijaabinta xoolaheennu. Dhacdooyinkani waxay fikrad fiican naga siinayaan in eeyahayagu u qalmaan taranka iyo in kale.
Laakiin, maskaxda ku hay, qof kastaa wuxuu leeyahay halbeegyo u gaar ah oo dhammaantood ma wada heshiin doonaan. Dadka qaar ma dhali doonaan qaniinyo ilaa ay ka noqoto Horyaal giraan show ah. Dadka qaarkiis uma tixgeliyaan qaniisad u qalma taranka illaa ay ka helayaan cinwaankeeda Master Hunter ama cinwaankeeda Utility Dog. Waa inaad adigu gaarto go'aannadaas adoo maanka ku haya fikradda ah inaad hagaajiso nooca.
Uguyaraan, waa inaad qiimeysaa mid kale, indho aqoon badan. Kalkaaliyeheedu wuxuu noqon lahaa xulasho ku habboon, si kastaba ha noqotee, taasi marwalba suurtagal maahan. Bixiye kasta oo khibrad leh oo ku takhasusay noocaaga gaarka ah waa inuu awoodaa inuu kaa caawiyo inaad ku qiimeyso qaniinyadaada si daacad ah oo aan lahayn dhalaalka jilicsan ee jacaylka oo beddelaya aragtidaada.
Hagaag, waan ku qanacsanahay inay tahay gabar tayo leh, oo u qalma taranka, waa maxay tillaabada xigta?
Halkaas ku hay! Ma aha sidaas dhakhso badan! Tani waa geedi socod dheer, xusuusnow? Waxaa jira sabab kale oo aad ugu baahan tahay inaad sugto illaa inta qaniinyadu ka weyn tahay da'da laba sano. Hubinta Caafimaadka! Waxaad u baahan doontaa in lagugu sameeyo baaritaanno caafimaad oo kala duwan si loo go'aamiyo bal in eeygaaga la dhaqmo iyo in kale.
Baadhitaannada caafimaad ee lagama maarmaanka ahi way ku kala duwan yihiin noocyada iyo noocyada waana inaad la tashataa buug wanaagsan oo ku saabsan jinsiyadaada ama xirfad yaqaan si aad u go'aamiso tijaabooyinka aad u baahan tahay inaad sameyso.
Imtixaanada ugu caansan waa:
Laabatooyinka : Hayso raajada xoolaha ee miskahaaga, xusullada ama kala-goysyada kale oo raajadaas u gudbi OFA (Foundation Ortopedic for Animals) si ay u qiimeeyaan. Haddii miskaha eeyahaaga lagu qiimeeyo mid Cadaalad ah, Wanaagsan, ama Fiican, eeygaagu waa caadi waana la dhaqmi karaa.
Haddii lagu qiimeeyo inay yihiin kuwa jilicsan, fadlan kala hadal baaritaankaan takhtarkaaga xoolaha kana buuxi qanjirkaaga sida ugu dhaqsaha badan. Hip Dysplasia waa xanuun xanuun wada jir ah oo badanaa lagu daweeyo siyaabo kala duwan. Waa wax la iska dhaxlo oo eey aan dysplastic aheyn waa inaan la dhaqin.
Indhaha : Noocyo fara badan, cudur loo yaqaan PRA (Progressive Retinal Atrophy) waa dhibaato daran. Khabiir ku takhasusay caafimaadka xoolaha oo ay guddiga xaqiijiyeen ayaa baari kara indhahaaga xayawaankaaga ah wuxuuna hubin karaa inay caadi yihiin. Tijaabadani waa in la sameeyaa sanadkiiba mar.
Maaddaama PRA ay tahay cudur horumar leh, eeygu wuu fiicnaan karaa hal sano oo wuxuu muujin karaa calaamadaha kan xiga. Baadhitaannada indhaha ayaa markaa loo diri karaa CERF (Canine Eye Registry Foundation) si loo caddeeyo oo ay tahay in sannad walba la cusbooneysiiyo. Waxaa jira cuduro kale oo indhaha ah (sida cataracts) oo ay wadaagaan noocyo kaladuwan sidoo kale; waxaad u baahan doontaa inaad baarto si aad u ogaato waxa ku habboon noocaaga.
Qaar kale : Cunsuriyadaadu waxay yeelan kartaa bambooyin waqti hidde u gaar ah leh. Waxaad u baahan doontaa inaad baarto noocaaga gaarka ah si aad u ogaato baaritaanka aad u baahan tahay inaad sameyso ka hor intaadan ka fikirin tarankaaga eyga.
Brucellosis : Kani waa cudur xubinta taranka ee cannaga oo siyaabo kale sidoo kale loogu gudbin karo. Xitaa eyda bikrada ah ama bisadaha waa in la baaro kahor taranka. Inta badan milkiileyaasha eyda waxay u baahan yihiin tijaabooyin brucellosis dhowaan ah ka hor inta aysan u oggolaan taranka inuu dhaco. Waxay guud ahaan tijaabin doonaan eeyahooda lixdii bilood ee ugu dambeysay. Haddii aysan tijaabin eeyahooda lixdii bilood ee la soo dhaafay, weydiiso inay sidaas sameeyaan ka hor intaanad ku dilin qaniinyadaada!
Waa inaad uga baahatid dhammaan isla tijaabada milkiilaha eyga iyo sidoo kale inaad iyaga siiso. Inbadan oo ku saabsan doorashada eeyga eyga, hoosta.
Xulashada qashinka qashinkaaga ayaa ah go'aan muhiim ah sida xulashada qaniinyadu markii hore ahayd. Waxaad u baahan tahay inaad waqti iyo dadaal kubixiso go'aankan. Tani waa wakhti fiican oo aad ku hesho talobixin khabiir ah.
Haddii ay suurtagal tahay oo dhan, waa inaad la tashataa brech your breeder oo aad weydiisataa inay wakhti kula qaataan adiga oo dul maraya xulashooyinka kala duwan si aad u fahanto sababta hal eey ugu fiicnaan lahaa eydaada mid kale. Haddii abuurkaaga ama khabiir kale aan la heli karin inuu wakhti kula qaato, markaa waxaad u baahan doontaa inaad sameysid baaritaanka kaligaa si aad u gaarto go'aan aqoon leh.
Waxa ugu horeeya ee aad rabto inaad sameyso waa inaad qaadataa macluumaadka aad soo aruurisay sanadihii la soo dhaafay ee ku saabsanaa qaniinyadaada oo aad falanqeyso xooggeeda iyo daciifnimadeeda. Iyadu ma waxay leedahay safka daciifka ah ee daciifka ah laakiin horay u fiican? Sidee u yahay angural angulation? Ka warran muraayada dharkeeda? Dabeecadeeda? Waad arki kartaa ogaanshaha sababta eygaaga looga soo saaro oo loo muujiyo iyo / ama iyada loo shaqeeyo ay waxtar u yeelan karto howshan.
Haddii aadan ogeyn waxa ku qaldan qaniinyadaada, ma ogid waxa aad rabto inaad ku hagaajiso jiilka mustaqbalka. Iyo, taasi runtii waa waxa aad isku dayeyso inaad sameyso - hagaajiso taranka adoo hagaajinaya qaniinyadaada. Marka si daacadnimo leh naftaada run ugu sheeg. Waad ogtahay inaad jeceshahay qashinkaaga, taasi su'aal kama taagna halkan, laakiin haddii aadan daacad ka noqon karin cilladaheeda, markaa ma hagaajin kartid jiilka mustaqbalka.
Waxaad ubaahantahay inaad diirada saarto hal, laga yaabee laba, dhibaatooyin aad jeclaan laheyd inaad aragto horumar oo aad raadiso eey harag ah oo ku xoogan meelahaas isagoon aad ugu liidan meelaha kale. Waxay noqon kartaa ficil isku dheelitirnaan jilicsan - dabcan, iyada oo aan lahayn dammaanad guul.
Waxaa jira laba aragtiyood oo waaweyn oo ku saabsan taranka oo aad rabto inaad fahanto. Midka koowaad waa kan ugu fudud: taranka sida loo jeclaado. Taas macnaheedu waa inaad eegto muuqaalka guud ee qaniinyada oo aad hesho ey eyda oo muuqaal ahaan u bogaya muuqaalkeeda. Aragtida ayaa ah haddii aad abuurto sida inaad jeceshahay, waad heli doontaa sida oo kale.
Dariiqa labaad ee lagula dhaqmayo taranka ayaa ka dhib badan. Waxaa loogu yeeraa taranka safka. Waxay ku lug leedahay falanqaynta abtirsiinta eydaada iyo eeyaha suurtagalka ah inay doortaan ciyaar fiican. Waxaa jira dhowr qaab oo loo wajaho taranka taranka. Ugu horreyntii, waxaad u baahan tahay inaad fahanto dhowr erey.
Taranka taranka waxay lamid tahay taranka oo kale sida inaad jeceshahay kaliya intaad ka uruurin lahayd iskumid ahaanta jirka, waxaad aruurineysaa hiddo sidayaasha ey gaar ah. Taranka waa taran xariiq aad u dhow. Markaad bilaabeysid taranka, waxaad dooneysaa inaad ka fogaato taranka maxaa yeelay waa qatar hadii aadan hubin hidaha ku lugta leh mooyee.
Nooca ugu dambeeya ee taranka-dhalashada waa ka gudub. Taranka guud wuxuu yeelan doonaa abtirsiimo meesha aysan ku oolin, ama ugu yaraan aad u yar, eeyaha ay wadaagaan. Tani waxay badanaa dhacdaa marka aad dhaqdo sida aad jeceshahay. Kalkaaliyeyaasha badankood waxay ku tababaraan nooc ka mid ah taranka taranka, guud ahaanna waxay diiradda saaraan mid ka mid ah mudayaasha muhiimka ah ee taranka.
Dabcan, waxaad rabtaa inaad hubiso in eeyga aad xoogga saareyso uu mudan yahay sharafta. Haddii aad saf u gashid eey dhexdhexaad ah - ama eey leh dhibaato caafimaad oo gaar ah - waxaad heli doontaa wixii aad weydiisatay. Taranka noocan ah ayaa khaas ah oo waxaad dooneysaa inaad hubiso inaad si taxaddar leh u baartay eeyaha ku abtirsada qowlaysatadaada si aad u ogaato meesha aad rabto inaad raacdo taranka xariiqda.
Ficil ahaan, waxaad u badan tahay inaad rabto inaad shaqaaleyso isku-dar ah labadan farsamooyin. Waxaad ubaahantahay inaad heshid abtirsiin uhogaanta qaniinyadaada iyo eey jir ahaan iswaafajin sidoo kale. Mar labaad, kani waa runtii waqti fiican oo la raadsado talobixinta aqoonyahannada aqoonta leh.
Doorashada eeyga cunugga sidoo kale waa sabab dhab ah oo wanaagsan oo aad ugu firfircoonaan karto howlaha nashaadaadka inta qaniinyadu da 'yar tahay. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad aqoon u leedahay eeyaha kala geddisan ee kala duwan ka hor intaaney qaniinyadu imaanin xilligii.
Mar alla markii aad ku soo koobtay xulashadaada laba ama saddex qof oo suurto gal ah in aad tartantid, waxaad u baahan doontaa inaad u yeerto milkiilayaasha eyda oo aad ka wareysatid eeyahooda. Inta badan milkiileyaasha eyda ayaa si daacad ah kaagala hadli doona waxa eydooda soo saaraan, xooggooda iyo daciifnimadooda, iyo waxaad filan karto. Haddii aysan ka soo bixin dhibaatooyinka iyo sidoo kale faa'iidooyinka eeyadooda, waa inaad ka fogaataa iyaga.
Waqti ka mid ah hawsha, waa inaad go'aan ka gaartid eeyga ugu fiican qashinkaaga. Cidina kuma samayn karto go'aankan laakiin haddii aad shaqadii gurigaaga ka soo qabatay oo aad si daacad ah naftaada uga hadasho qaniinyadayda, markaa waxaad u badan tahay inaad heli doonto eey u dhigma
Markaa waxaad diyaar u tahay inaad gasho jebinta hiddo-wadaha oo aad aragto waxaad hesho. Sababtoo ah waxaan ka ognahay wax yar oo ku saabsan hiddo-wadaha murugsan ee ka dambeeya eeyahayaga, runti waxaad wax ku tooganeysaa mugdiga. Xitaa abuur sameeyaha ugu khibrad badan ayaa khaladaad sameeya - tani waa sababta aad u rabto inaad aad uga taxaddarto oo aad u dhammaystirto cilmi-baaristaada.
Marka go'aankaaga la gaaro, waxaad u baahan doontaa inaad ogeysiiso milkiilaha eyga haraaga ah goorta aad filayso in qaniinyadu ay timaaddo xilli si ay iyagu qorshooyin u gaar ah u sameeyaan. Waxaad ubaahantahay inaad uxidho eygaaga eyga wiiga usbuuca ugu horeeya xiligeeda si ay waqti ugu hesho laqabsashada hareeraheeda cusub kahor intaan la baarin.
Ku hayso macluumaadka soo socda feylka qashin kasta / qashin kasta oo aad soo saarto:
Number Litter (dariiqa lagu kala sooco qashinka qolkaaga)
Taariikhda natiijada iyo natiijada
Taariikhda baaritaanka Progesterone iyo natiijooyinka
Taariikhaha taranka iyo faallooyinka ku saabsan taranka
Taariikhaha kaltanka iyo natiijooyinka
Taariikhda Ultrasound iyo natiijooyinka
Taariikhda raajada iyo natiijooyinka
Lasoco miisaanka oo kordha toddobaadle
Lasoco heerkulka laga bilaabo maalinta 58-65, 3 jeer maalintii
Taariikhda iyo goorta neefsashada la bilaabay
Taariikhda iyo waqtiga xiiqda ay dhammaatay
Xusuusin on whelping
Diiwaanka Litter (sida loogu baahan yahay AKC)
Magaca diiwaangashan iyo lambarka AKC ee biyo xireenka
Magaca diiwaangashan iyo lambarka AKC ee shaashadda
Magaca milkiilaha Sire
Taariikh qashin whelped
Tirada eeyaha yaryar ee dhasha
Tirada eeyooyinka dhadig ee dhasha
Jinsiga, Midabka / Calaamadaha, Lambarka Aqoonsiga eey, Taariikhda La Iibiyay, Taariikhda uu Dhintay, Magaca iyo cinwaanka qofka la iibiyey, Taariikhaha markii la raacayo waraaqaha la keenay: arjiga diiwaangelinta ama shahaadada iyo biilka iibka; magaca iyo lambarka AKC ee eey.
Waqti eey kasta dhashay
Midab Ribbon ama calaamado kale oo lagu garto
Sharaxaad ku saabsan wixii dhibaato ah
Sire iyo Dam
Waqtiga oohinta ayaa bilaabatay oo dhammaatay
AKC Qashin #
Diiwaangelinta AKC #
Miisaanka dhalashada iyo marka la iibinayo
Talaalada la bixiyay (Taariikhda iyo Nooca)
Mulkiilaha (ku dar cinwaanka iyo lambarrada taleefanka)
Taariikhda la iibiyay
Xusuusin ku saabsan Horumarka iyo Dabeecadda
Dhabarka foomkaan, kala soco culeyska eyda maalin kasta illaa ay ka gaaraan saddex toddobaad ka dibna toddobaadle intaas ka dib.
Codsiga Diiwaangelinta Qashinka
La xiriir AKC oo codso foomkan. Marka eey yaryar la cayaaro, buuxi foomkan oo mulkiilaha eyga saxeexa foomka saxeex. U dir foomka oo dhammaystiran oo leh khidmad ku habboon AKC. Way fiicantahay inaad u dirto baqshad shaabadaysan oo cinwaankeedu yahay dalabka mulkiilaha eyga si ay ugu diraan AKC dib u dhac la'aan.
Codsiyada diiwaangelinta qashinka waa in ay ku heshaa AKC lix bilood gudahood laga bilaabo taariikhda whel si loo diiwaangeliyo eeyaha 'AKC'. Si kastaba ha noqotee, waa inaad soo gudbisaa foomkan sida ugu dhakhsaha badan eeydu u jilicsan yihiin si aad ugu geyn karto waraaqaha saxda ah eeyaha yar yar ee iibsanaya markay soo qaadaan eeyahooda.
Foomamka Diiwaangelinta Eeyaha
Ey kasta oo ku qoran Arjiga Diiwaangelinta Qashinka, waxaad heli doontaa foom diiwaangelin ah oo aad siiso eeyaha iibsadayaasha si ay uga diiwaangeliyaan eeyahooda AKC. Farsamo ahaan, eeyga yar ee wax iibsadaa wuxuu magacaabi karaa eeyaha wax kasta oo ay rabaan. Xaqiiqdii, kuwa wax soosaara badankood waxay ku adkaysanayaan magacyadooda inay yihiin erayga ugu horreeya eeyaha eeyga. Intaa waxaa sii dheer, kuwa wax soo saara qaarkood waxay leeyihiin mowduucyo qashinkooda waxayna u baahan yihiin magaca eey si ay ula jaan qaadaan mawduucaas. Samee shuruudo kasta oo gaar ah oo iibsadayaashu si fiican u sii ogeysiiyaan si ay ugu soo xulan karaan magac ku habboon eygooda.
Dooro eygaaga durdurka ka hor waqtiga. Ogeysii milkiilaha eeyga cunugga markaad ogaato inaad qaniinyadu imaanayso xilli. Waxay kuu sheegi doonaan wixii shuruudo ah ee ay haystaan.
Waa inaad sidoo kale doorataa keyd, sidoo kale haddii xulashadaada koowaad aan la heli karin
Baadhitaankaaga qaayad ee dhakhtarka xoolaha si loo hubiyo inay caafimaad qabto. Samee tijaabada 'brucellosis' sidoo kale.
Isla marka aad aragto astaamaha ugu horreeya ee qaniinyadu ku jirto xilli, la xiriir milkiilaha eyga. Haddii eeygaaga jiiska ahi uu ka baxsan yahay aagga, waxaad u baahan doontaa inaad ka wada hadasho qabanqaabada maraakiibta xilligan si aad u awood u yeelato inaad diyaariso dhammaan howlaha loo baahan yahay.
Haddii tani ay tahay tarankaagii ugu horreeyay ee eydaada, waxaad u baahan doontaa inaad ogaato goorta ay diyaar u tahay in la beero. U tag dhakhtarkaaga xoolaha ku saabsan baaritaanka smear iyo / ama baaritaanka qanjirka 'progesterone'. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad tilmaamto waqtiga saxda ah ee aad qashinkaaga u geyn karto eeyga. Tani waxay caadiyan ahaan doontaa inta udhaxeysa maalmaha 10 iyo 15 laakiin waxay noqon kartaa wax aad usii fog ama ka dambeeya.
Waxaad sidoo kale dooneysaa inaad jadwal u sameyso baaritaanka 'brucellosis' si natiijooyinka ay u noqdaan kuwa hadda leh milkiilaha eyga.
Markay qaniimadu diyaar tahay
La xiriir milkiilaha eyga oo u sheeg goorta iyo sida ey eygu imaan doonaan.
Haddii aad rarayso qashinka, milkiilaha eeyga cunuga ayaa eeyga ka soo qaadi doona garoonka diyaaradaha wuxuuna u baahan doonaa dhammaan macluumaadka. Waa inaad u soo dirtaa waraaqaha oo dhan qashin. Waxaad ku dhejisan kartaa baqshad sanduuqa.
Haddii aad adigu u geynayso eeyga, hel tilmaamo wanaagsan oo keen dhammaan waraaqahaaga.
Markay eygu guriga yimaado
Qaniinyadu waxay la joogi doontaa milkiilaha eyga isbuuc ama laba.
Markay eygaagu guriga yimaado, waa inaad ka heshaa xoogaa waraaqo ah milkiilaha eyga, oo ay ku jiraan qandaraas, nuqulo ka mid ah nadiifinta caafimaadka eeyga eyga, abtirsiimada eyga, iyo macluumaadka goorta ey qaniintay.
Bacriminta ayaa dhacda
2 embriyaha unugyada ayaa ku jira oviduct-ka
Uur-ku-jirka ayaa si caddaalad ah ugu adkaysanaya faragelinta dibedda ee horumarka
Cudur suurogal ah
Isbedelada shakhsiyadeed ee suurtogalka ah
Quudinta caadiga ah
Jimicsi caadi ah - haddii aysan caadiyan jimicsi sameynin uurka kahor, waa inay bilawdaa jimicsi dhexdhexaad ah maalin kasta
Ku hubi dhammaan iyo dhammaan daawooyinka dhakhtarka xoolaha kahor intaadan maamulin
Ma jiro sunta cayayaanka (sida, daaweynta boodada)
Talaal nool malahan
Isug dhig isir ahaan qashinka
La xiriir AKC si aad u hesho arjiga diiwaangelinta qashinka
Ku billow qaadashada boos celinta eey
Toddobaadka Labaad (Maalmaha 8-14)
Embryo wuxuu noqonayaa 4 unug bilawga usbuuca iyo 64 unug usbuuca dhamaadkiisa
Embryo wuxuu galaa ilmagaleenka
U sii soco sidii usbuuca koowaad
Wax gaar ah toddobaadkan
Toddobaadka Saddexaad (Maalmaha 15-21)
Maalinta 19 - Ku-tallaalida embriyaha ilmo-galeenka
Toddobaadka afraad (Maalmaha 22-28)
Horumarka indhaha iyo xadhkaha lafdhabarta
Wejiyadu qaab bay yeeshaan
Uurjiifyadu waxay ka koraan 5-10 mm ilaa 14-15 mm
Organogenesis ayaa bilaabmaya – Embryos-ka ayaa ugu nugul cilladaha
Maalmaha 26 - 32 waa maalmaha ugu fiican ee la xoqo (yacni dareenka uurjiifka)
Dheecaan siilka ah oo suurta gal ah
Horumarka naasku wuxuu bilaabmaa
Maalinta 26 kadib, wadno garaac ayaa suuragal ah in lagu ogaado uurka
Xaddid dhaqdhaqaaqa culus (sida shaqada, boodka, orodka dheer)
Kudar 1/4 koob oo jiis ah ama ukumo adag oo la kariyey cuntada maalmaha kale
Jadwal u samee ultrasound ama wadno garaac leh dhakhtarka xoolaha haddii la doonayo
Toddobaadka Shanaad (Maalmaha 29-35)
Horumarinta suulasha, burooyinku, iyo ciddiyaha
Uurjiifyadu waxay u egyihiin eeyo
Jinsiga waa la goaamin karaa
Indhaha (hore u furmay) hadda way dhowyihiin
Uurjiifyadu waxay ka koraan 18 mm - 30 mm
Organogenesis wuu dhammaadaa - embriyaha hadda si cadaalad ah ayey ugu adkeysanayaan faragelinta horumarka
Bararku wuxuu noqdaa mid la ogaan karo
Miisaanka ayaa bilaabi doona inuu kordho
Xoogaa u kordhi qadarka cuntada una beddel kibble yar yar. Haddii aad quudiso hal cunto maalintii, ku dar cunto yar oo dheeraad ah. Haddii aad quudiso laba jeer maalintii, wax yar ka kordhi mid ka mid ah cuntooyinka.
Ku dar fiitamiin badan eeyaha maalin kasta
Daawada suuxdintu mar dambe suurtagal maaha dheecaannada ku dhaca makaanka
Usbuuca Lixaad (Maalmaha 36-42)
Horumarinta midabka maqaarka
Uurjiifyadu waa inay culeys ahaadaan ilaa 6 garaam oo dhererkooduna yahay 45 mm
Wadna garaaca wadnaha waxaa lagu maqli karaa stethoscope
Ibta ayaa madoobaata oo weynaata
Calooshu way sii ballaaraysaa
Kudar farmaajo ama ukunta adag ee la kariyey maalin walba cuntada
Kordhi qadarka cuntada ku jirta cuntada dheeriga ah
Qaniinyadu waa inay ku bilaabataa hurdada sanduuqa dhawaaqa
Isu ururi sanduuqa dhawaaqa
Waqtigan xaadirka ah waa inaad si cadaalad ah u hubisaa in qashinku uur leeyahay. Ogeysii dadka kujira liiska eeyahaaga. Ogeysii marka aad fileyso inaad umuliso.
Toddobaadka toddobaad (Maalmaha 43-49)
Kobaca iyo horumarka ayaa sii socda
Timaha calooshu waxay bilaabi doonaan daadinta
Qaniinyadu waxay bilaabi doontaa inay u ekaato uur markan
Si yar u kordhi labada cunto
Jooji qashin-qubka ama boodka
Raajo raajo (raajo) macquul ah si loo ogaado tirada iyo cabbirka eeyo yaryar
Toddobaadkii Sideedaad (Maalmaha 50-57)
Dhaqdhaqaaqa uurjiifka ayaa la ogaan karaa marka qaniinyadu nasato
Eydu si ammaan ah ayey u dhalan karaan wixii hadda ka dambeeya
Waxa laga yaabaa in caanaha laga soo tuujiyo ibta naaska
Qaniinyadu waxay noqon doontaa mid aad u ballaaran.
Kudar qado dhexdhexaad ah
Soo ururi xirmada whelping (eeg hoos)
U diyaari liiska taleefanka caawimaadda / taageerada. Waa inay ku jiraan lambarka taleefanka takhtarkaaga xoolaha, lambarka taleefanka rugta gargaarka degdegga ah, lambarka asxaab kasta oo bixin doonta taageero inta lagu guda jiro whel, iyo qof kasta oo kale oo aad u baahan karto inaad la xiriirto ka hor, inta lagu guda jiro, ama ka dib marka la neefsado (sida xafiiskaaga si loogu wargaliyo iyaga ma geli doontid!)
Hubso in gaarigaaga uu ku jiro gas oo uu diyaar u yahay safar deg deg ah oo suurogal ah xafiiska dhakhtarka xoolaha.
Toddobaadka Sagaal (Maalmaha 58-65)
Kobaca iyo Horumarku way socdaan
Habdhaqanka buulshada waa la arki karaa
Daloolisku wuxuu noqon karaa mid murugaysan (neefsasho, ruqso, ficil aan fiicnayn)
Heerkulku waa inuu ahaadaa qiyaastii 100.2-100.8 darajo Farenheit
Marka heerkulku hoos u dhaco illaa 98-99.4 digrii Farenheit, eeydu waa inay ku dhashaan 24 saacadood gudahood
Rabitaanka cuntada ayaa baaba'aya markii sanqadha neefta ay soo dhowaato
Bilow qaadashada heerkulka saddex jeer maalintii
Ogeysii dhakhtarka xoolaha ama rugta caafimaadka degdega ah marka heer kulku hoos u dhaco si ay diyaar ugu noqdaan haddii aad wax dhibaato ah qabtid
Hayso diiwaanno faahfaahsan oo ku saabsan heerkulka iyo habdhaqanka qaniisiinta
Laba jeer hubi in sahayda whelping ay diyaar yihiin
Hubso in eey kastaa qaata qaar ka mid ah dambarta qaniinyada (caanaha khafiifka ah ee ugu horreeya) gudaha 24 saacadood ee ugu horreeya. Dambar waxaa lagu rakibaa unugyada difaaca jirka si eyda looga ilaaliyo cudurka. Waxay kaloo ka caawisaa inay shuruud ku xirtaan calooshooda inay aqbalaan cuntada.
Lochia (dheecaanka siilka) waa inuu noqdaa casaan ilaa casaan-bunni ah (cagaar waa caadi maalinta koowaad). Haddii aad aragto dheecaan madow, la xiriir dhaqtarkaaga isla markiiba!
5-6 saacadood gudahood dhalashadii ugu dambaysay ee uurka ah, qaado qaniinyo iyo eyyo si aad u hubiso baaritaanka. Dhakhtarka xoolaha ayaa hubin doona in eyda aysan haysan wax eey ama mandheer ah iyo inydu ay caafimaad qabaan. Weydii dhakhtarkaaga xoolaha inuu ka hubiyo eeyaha yar yar ee dusha sare iyo dookhyada jira. Booqashadan dhakhtarka xoolaha waa wax aan laga boodi karin. Hadday qaniinyadu haysato mandheer ama eey, waxay si dhakhso leh ugu dhici kartaa infekshan daran oo horseedi kara dhimasho.
Diyaarso gaarigaaga haddii ay dhacdo inaad safar deg deg ah ugu tagto xafiiska dhakhtarka xoolaha. Fikrad ahaan, waxaad heli doontaa qof aad wado intaad la fadhidid gabadha yar yar. Soo qaado shukumaanno maxaa yeelay waa wax caadi ah in eyda yar ay ku bilaabato gaarsiinta dhaqdhaqaaqa gaariga. Waa inaad ku ilaaliso gogosha gaarigaaga ama gogosha go' ama buste la dhaqi karo.
Hubso in gaariga gaasku leeyahay oo diyaar u yahay inuu socdo. Haddii aad u baahato inaad safarka sameysid, ma doonaysid inaad dib u dhigto waxyaabahaas oo kale. Haddii aadan haysan qof kaa caawiya kaxaynta baabuurka, hubi inaad haysato santuuq weyn oo aad si ammaan ah uga koobnaan karto qaniinyada iyo eeyooyinka ku dhasha safarka.
Sanduuq ay ku jiraan dhinacyo waawayn oo ku filan si ey eydu ugu fidiso si raaxo leh. Iyada iyo cunugyadu waxay ku noolaan doonaan sanduuqa toddobaadyada ugu horreeya. Sanduuqa dhawaaqa waa inuu lahaadaa biraha ilaaliyaha (oo sidoo kale loo yaqaan biraha doofaarka) oo ka soo baxaya dhinacyada si looga ilaaliyo eeyaha yaryar ee ka soo baxa hooyadood. Cabirka sanduuqa wuxuu ku xirnaan doonaa xajmiga eygaaga.
Gacanta ku hay joornaal aad u wanaagsan si aad u dhex dhigto sanduuqa naaska lagu neefsado inta lagu jiro neefta dhabta ah. Maaddaama waraaqaha ay qasan yihiin, waxaad hoos u ridi kartaa lakab cusub oo nadiifin kartaa wax walba marka ay sanqadhu dhammaato.
Gacanta ku hayso qashin qashin ah oo aad ku isticmaali karto inta lagu jiro sanqadheynta iyo inta ciyaalku korayaan. Ii aamin - Eydu waa qasan yihiin!
Tuwaallada waraaqaha ah
Waxaad u baahan doontaa sanduuq yar oo gacanta ah si aad u dhigatid eeyaha goorta ay hooyadu ureyneyso eey kale. Ma dooneysid in ciyaalku ay qabow noqdaan markaa ku xir tuwaal oo ku ag dhig meel u dhow kuleylka ama ku dheji suufka kuleyliyaha tuwaalka. Dambiilaha dharka lagu dhaqo oo nadiif ah ayaa tan si fiican uga shaqeeya - waana sahlan tahay in la qaado marka aad u baahan tahay inaad u kaxaysato cunugga dhakhtarka xoolaha ee baaritaanka ugu horreeya.
Maqasyada Amniga Sharp
Budada Joogso Deg Deg Ah
Si loo joojiyo dhiigbaxa, haddii ay jiraan, ka dib goynta xundhurta.
Nadiifinta dhamaadka xudunta xudunta ka dib goynta.
Isku xirka xudunta intaan la jarin. Waxaad isticmaali kartaa labo oo aad jeexjeexi kartaa xarigga si aad ugu beddesho jarista. Tani waxay caawineysaa joojinta dhiig baxa.
Xiritaanka xudunta ka dib goynta.
Isticmaal haddii ay tahay inaad gacan ka geysato samatabbixinta eeyaha.
Heerkulbeeg dijitaal ah
Hubinta heerkulka qaniisadda ee maalinta ka horreysa taariikhda dhalmada.
Caawinta nadiifinta eeyooyinka ku dhasha dhibaatooyinka.
Eydu waxay had iyo jeer umuuqdaan inay yimaadaan saqda dhexe ee habeenka haddii aad ubaahantahay inaad qaniinyadaadu banaanka u baxdo, waxaad u baahan doontaa inaad il gaar ah ku hayso iyada. Toosh toosan oo xoog leh ayaa taas fududeyn doonta.
Xadhig iyo silsilad xirxiran oo fidsan
Sabab la mid ah tan kor ku xusan. Haddii aad ka saarto xarig, iyadu uma badna inay ku baaba’do meel madow oo ay ku reebto eey halkaas adigoon ogeyn.
Waqtiga cibaadada iyo waqtiga u dhexeeya eeyaha.
Wixii faahfaahin duubis ah. Xaashiyaha eyda ee ku xusan xaashida haynta rikoodhka sidoo kale way shaqeyn doonaan.
Aqoonsiga eeyo. Xidh xoogaa dabacsan oo qoorta kasto oo kasta markii aad iska hubineysid oo miisaan ka dib dhalashada.
Si loo miisaamo eeyo yaryar markay dhalayaan iyo maalin walba wixii ka dambeeya.
Suufyadan calalinta ah waxaa lagu kululeeyaa microwave-ka illaa 5-7 daqiiqo waxayna diirimaad helayaan ugu yaraan 12 saacadood. Maaddaama ayan isticmaalin koronto, way ka ammaan badan yihiin fursadihii hore ee laambadaha kuleylka ama kuleylka. Hal magac oo magac ah kuwan waa Snuggle Safe Heat Pad.
Haddii cimiladu aad u kulushahay, waa inaad ku haysataa marawaxadda gacanta. Tani waxay ku badan tahay hooyada marka loo eego carruurta. Ha dhigin marawaxadda inuu toos ugu afuufo ardayga laakiin halkii aad ka wareejin lahayd hawada dusha sare ee sanduuqa whelping. Haddii hooyadu wax badan ku neefsaneyso sanduuqa neefta markey dhammeyso oo ay nasato, diyaarso marawaxadda si ay u qaboojiso uguna raaxeyso eeyaha.
Suufiyada Feedhka ama bustayaasha
Inta ay ardaydu wali ku jiraan sanduuqa whelping, waxaad u baahan doontaa inaad buste ku hayso sanduuqooda. Suufkani wuxuu u baahan doonaa in la beddelo laba jeer maalintii ama in ka badan, iyadoo kuxiran sida ugu wanaagsan ee biyo-xidheenku u nadiifiyo cunnooyinka ka dib. Gabal dhogor ah oo shukumaan ah oo dhabarka loogu tolay cabbir la mid ah sanduuqa neefta ayaa samaynaya suuf weyn. Waa la dhaqi karaa lana cadeyn karaa si ay nadiif u ahaadaan. Inaad afar gacanta ku haysato ayaa kaa ilaalin doonta inaad dhar dhaqid joogto ah sameyso. Ha dhigin suufyadan sanduuqa neefta ilaa whelku ka dhammaado.
Hagaag, waa wakhti show! Qaniinyadiina waa diyaar, waxaana rajeynayaa, inaad adiguna tihiin! Macluumaadka hoos ku qoran waxaa loogu talagalay neef-qaadis caadi ah. Haddii khibradaadu waxbadan ka weecato sharraxaaddan, markaa waa inaad isla markiiba la xiriirtaa dhakhtarkaaga xoolaha. Dib u dhigista raadsashada caawimaad waxay halis gelin kartaa eeyooyinka iyo / ama eygaaga. Waqtigaani hubaal waa waqtigii lagu xasuusan lahaa 'ka ammaan badnaan lahayd xumaanta.'
Maalinta 58 ka dib taranka ugu horreeya, waxaad u baahan doontaa inaad bilowdo qaadashada heerkulkaaga qaniisadda saddex jeer maalintii. Heerkulka qaniinyada ayaa hoos uga dhici doona qiyaastii 101.4 illaa 99 digrii Fahrenheit ama ka hooseeya dhawr saacadood ka hor intaysan diyaar u ahayn inay whelp. Is bedbedelka kuleylka ayaa ah mid caadi ah, waxaad raadineyso waa hoos u dhac aad u hooseeya oo ka hooseeya 99F.
Heerkulka hoos u dhaca ayaa ah tilmaamha ugu wanaagsan ee sanqadhista dhow. Calaamadaha kale ee sanka lagu neefsanayo waa degganaansho la'aan, raaxo la'aan, leefleef iyo fiirinta xubinta taranka haweenka. Qaniinyadu way diidi kartaa cuntada ka hor inta aan la neefsan sidoo kale. Waxay u badan tahay inay si weyn u hungoobayso.
Kuwani dhammaantood waa calaamado muujinaya in sanqadha neefsiga ay dhowdahay. Wac dhakhtarkaaga xoolaha una sheeg in shaybaarku bilaabmayo si ay diyaar ugu ahaadaan inay ka jawaabaan wixii su'aalo ah ama ay talo ka siiyaan haddii aad wax dhibaato ah qabtid. Qaniinyadu waxay bilaabi doontaa inay riixdo oo ay miiqdaan mar uun waxayna bilaabi kartaa inay wax ka qodaan gogosha.
Aad bay u naaxi doontaa inta u dhaxeysa foosha. Maroojisyada waa inay ka muuqdaan muruqyada gadaasheeda, iyadoo loo maleynayo inaad ka arki karto muruqyadeeda dhabarka dharkeeda. Waxaad arkaysaa iyaga oo ka bilaabanaya dusha sare ee jidhkeeda oo ay hoos u sii socdaan.
Haddii foosha ay sii socoto saacad ama wax la mid ah iyada oo aan la soo saarin eey, qaniinyadu ha u baxdo banaanka oo hareerahaaga ku soo wareegto. Tani waxay kaa caawin kartaa horumarka shaqada. Sidoo kale, rabitaanka riixitaanka wuxuu dareemi karaa, qashin, sida inay tahay inay saxarooto. Qaniisad si fiican u tababaran ma rabto inay jabiso jadwalka guryaha isla markaana waxay la dagaallami doontaa rabitaanka riixitaanka, dib u dhigista foosha.
Haddii qaniinyadu ay diyaar u tahay inay dibadda u baxdo, il gaar ah ku hay iyada. Hadday mugdi tahay, qaado toosh. Gabadh yar oo bikrad ah, gaar ahaan, ma garan karto waxa ay ku samaynayso eey cusub oo way iska dayn kartaa.
Haddii foosha ay sii socoto in ka badan seddex saacadood adigoon soo saarin eey, wac dhakhtarkaaga xoolaha! Waxaad ubaahantahay inaad uxirto qashin yar xoolaha.
Haddii loo maleeyo foosha inay si caadi ah u socoto, foosha ayaa si dhakhso leh u imaan doonta isla markaana qaniinyadu waxay bilaabi doontaa inay si dhab ah riixdo Kiishka biyaha ayaa soo muuqan doona, laga yaabee inuu jabo, ka dibna eey yar baa la keenayaa waqti yar. Mindhicirka ayaa laga yaabaa ama diyaar uma ahan in la keeno xiligaan.
Si tartiib tartiib ah ayaad u soo jiidan kartaa xarigga si aad u aragto inuu soo socdo laakiin waa inaadan waligaa jiidin eeyga si aad u hubiso. Waxaad xadhiga ka jari kartaa eeyaha waxaadna halis ugu jirtaa hernia hernia.
Qaniinyadu waxaa laga yaabaa inay rabto inay cunto mandheerta. Fikradaha way ku kala duwan yihiin in tani ay tahay fikrad wanaagsan iyo in kale. Dadka qaarkiis waxay u maleynayaan inay nafaqo wanaagsan u tahay qaniinyada markay dadaal badan muujineyso. Qaar kale waxay dareemayaan in qaniinyadu shuban ka qaadi doonto cunistooda. Bixiyeyaasha qaar ayaa tanaasul sameeya iyagoo u oggolaanaya eyda inay mid cunaan midna ka fogeeyaan iyada.
Wax kastoo aad sameyso, waxaad dooneysaa inaad hubiso inaad mandheer u leedahay eey kasta oo dhasha. Hadday qaniinyadu haysato mandheer, waxay halis ugu jirtaa inuu ku dhaco infekshin daran oo ku dhaca minka.
Haddii aad rabto inaad sameyso si aad ugala wareegto qaniinyada waqtigan, waxaad u baahan doontaa inaad ka nadiifiso kiishka biyaha sanka iyo afka eey marka hore. Ey yar foorari hoos si ay uga caawiso dheecaanka iyo xabka sanka iyo cunaha ka soo baxa. Ku xoq eeyaha si aad u xoog badan - xitaa qiyaas ahaan - tuwaal qallalan oo nadiif ah ilaa eyku qaylinayaan. Is xoqistaani waxay nadiifin doontaa eey yar yar waxayna kicineysaa inay neefsashada bilowdo.
Dad badan ayaa u oggolaada eyda inay nadiifiso eeyaha oo ay calaliso xudunta. Qaar kale waxay ka walwalaan in qaniinyadu ay calali karto xadhigga meel aad ugu dhow eeyaha taasoo keenta hernia hernia oo ay doortaan inay wax ka qabtaan naftooda si ay u badbaadaan.
Haddii aad doorato inaad hawsha qabato naftaada, waxaad u baahan doontaa inaad xariga ka jarto 1 ″ meel ka baxsan jirka oo aad ku xirto dunta ilkaha oo cad. Dhex mari caarada iyo xasawda xalka Betadine (ama jeermiska kale sida iodine). Way qallajin doontaa oo hoos u dhici doontaa maalin ama wixii ka dambeeya.
Mar haddii cunuggu neefsanayo oo nadiif yahay, ama ha sameysay ama biyo xireenka ayaa sameeyay, waxaad u baahan doontaa inaad si taxaddar leh u eegto eeyga, miisaamid oo cabirto cunugga, ka hubi cilladaha aan caadiga ahayn sida kala-goysyada dillaacsan, isla markaana u aqoonsato eeyga si uun . Rickrack ribbon aad buu u shaqeeyaa.
Cabir oo goo gabal ku filan oo si dabacsan ugu xirayo eeyaha qoortiisa. Tani waxay lagama maarmaan tahay oo keliya haddii eeyadu aad isugu eg yihiin. Siyaabaha kale ee loo calaamadeeyo eeyooyinka waxaa ka mid ah googoynta dhogorta qaybo ka mid ah jirkooda ama lagu calaamadeeyo ciddiyaha.
Haddii qaniinyadu ay kala dhexeyso eey yaryar, waa inaad u oggolaataa kalkaalisada eey. Dambar (caano la soo saaray 24-ka saac ee ugu horeeya) aad ayuu muhiim ugu yahay eeyaha. Waxay xanbaarsan tahay xasaanad ka ilaalinaysa eyda infekshanka. Kalkaalinta caafimaad ee eeydu waxay sidoo kale kicin doontaa foosha foosha u oggolaanaysa foosha inay horumar ku tallaabsato.
Qaado fursad aad ku nasato oo aad ku nasato inta aad karto. Ha walwelin, si kastaba ha noqotee, haddii aadan ku heli karin eyda isla markiiba biyo xireenka. Waxay tagi karaan dhowr saacadood iyagoo aan helin caano aan dhibaato lahayn. Marka foosha mar labaad dib u bilowdo, u guur eeyaha ku rido sanduuqa kiciyaha badbaadada inta biyo xireenka la mashquulinayo.
Badanaa waxaa jiri doona nasasho dheer oo udhaxeeya eeyaha qiyaastii kalabar. Waad qaadan kartaa gabadha yar yar banaanka, in kastoo aysan dooneynin inay ka tagto eeyaha (waa inaad dhiirrigelisaa!). Mar labaad, waxaad u baahan doontaa inaad il gaar ah ku haysa iyada si aad u hubiso inaysan u soo bixin eey yar halkaasna ayna ogeyn waxa lagu sameeyo.
Eydu waxay u imaan karaan sida ugu dhakhsaha badan 15 daqiiqo oo u dhexeysa ama in ka badan saacad. Hadday qaniinyadu tagto wax ka badan saacad oo aad u malaynayso inay jiraan eeyo badan, wac dhakhtarkaaga xoolaha! Waxaa jiri kara eey ku dheggan oo waxaad u baahan doontaa inaad hubiso inaad ka soo baxdo sida ugu dhakhsaha badan.
Markay qaniinyadiina dhammeyso iyadoo neefta wadata, waxaad ogaan doontaa inay degto. Neefsigeedu wuu gaabin doonaa oo foosha ayaa joogsan doonta. Waa inaad gashaa eyda iyo eyyadeeda dhaqtarka xoolaha afarta ama shanta saac ee soo socota haddii ay macquul tahayba. Ha dhaafin wax ka badan 24 saacadood adiga oo aan iska hubin.
Haddii qaniinyadu leedahay eey sii haysata ama mandheer, waxay halis ugu jirtaa infekshin daran. Haddii eeyo yaryar midkood ay leeyihiin dusha sare ama cilado kale, waxaad u baahan tahay inaad sida ugu dhakhsaha badan u ogaato. Eeyooyinka noocan oo kale ah sida caadiga ah bini'aadankaaga ayaa ku qanciya dhakhtarkaaga maaddaama guud ahaan aysan u badnayn inay noolaadaan.
Waxaa jira dhibaatooyin kala duwan oo laga yaabo inaad la kulanto. Mar labaad, hayso takhtarkaaga xoolaha iyo / ama lambarka taleefanka takhtarkaaga xaaladaha degdegga ah haddii ay dhacdo xaalad aadan u diyaar garoobin. Haddii aad wax su'aal ah ka qabtid waxa dhacaya ama waxa xiga ee aad samaynayso, ha ka waaban inaad wacdo dhakhtarka xoolaha. Runtii waxaad la macaamilaysaa xaaladaha nolosha ama dhimashada waana wax aad uga wanaagsan inaad ka nabad gasho intaad ka xumahay.
Qaar ka mid ah soosaarayaasha ayaa soo jeedinaya in daroogooyinka qaarkood gacanta lagu hayo si ay uga caawiyaan qaniinyadu haddii ay dhibaato kala kulanto bixinta. Waxaad kala hadli kartaa tan dhakhtarkaaga xoolaha laakiin kuma talinayo dhaqankan. Daawadani waa mid aad u xoogan waxayna sababi kartaa dhibaatooyin daran haddii dhibaatadu ay tahay eey weyn oo xiraya kanaalka dhalmada. Xulashada ugu fiican ayaa ah inaad la xiriirto dhakhtarkaaga xoolaha isla markaana aad la gasho qashinkaaga haddii loo baahdo.
Waxa jira dawooyin kale oo badal ah oo kuwa badan oo ka mid ahi ay isticmaalaan isla markaana kugula taliyaan hadda inay leeyihiin natiijooyin isku mid ah iyaga oo aan lahayn halista dhaawaca. Qaniisad shaqadeedu ay gaabis tahay, waxaa jira daweyn homeopathic ah oo lagu magacaabo Caulophyllum (Blue Cohash). Tan waa in la maamulo markay qaniinyadu ku jirto foolasho aan wax soo saar lahayn.
Ha isticmaalin ilaa qaniinyadu si cad u foolaneyso mooyee. Eeyaha yaryar ee ku jira-dhibaatada, waxaad isku dayi kartaa badeecad la yiraahdo Bach's Rescue Remedy. Waa tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ah loogu qaadi karo Kaliya waxaad ku ridi lahayd dhowr dhibic carrabka eyga. Waxa ugu fiican ee ku saabsan daaweyntan ayaa ah in aan si xad dhaaf ah loo isticmaali karin. Aad bay u jilicsan yihiin.
Dadka ka soo goosta homeopathic ama tallaabooyin kale ayaa kuu sheegi doona in daaweyntani aysan waxba qaban doonin, wanaag ama xun. (Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan mowduucan, fiiri Qeybta Kheyraadka ee hoose. Waxaa jira dhowr buug oo ku saabsan Caafimaadka Dabiiciga ah.)
Dhibaatada ugu horeysa ee aad arki karto waa qashin yar oo bilaaba foosha laakiin aan ku sii wadin gaarsiinta.
Marka hore, waa inaad iskudaydaa inaad kuxariiriso banaanka si aad u aragto inay taasi ka caawinayso inay nasato oo ay bilawdo riixitaanka. Haddii taasi shaqeyn weydo qiyaastii 15 daqiiqo, waxaad isku dayi kartaa farsamo la yiraahdo 'baal-baal'. Gasho galoofyada qalliinka oo mari qadar yar oo saliid ah sida KY Jelly. Si tartiib ah, tartiib ah, si tartiib ah hal farood u geli xubinta taranka gabadha isla markaana si tartiib ah u tiiri - ama baal - iyada oo ku teedsan dusha sare siilka. Tani waxay kaa caawin kartaa kicinta foosha xoog leh. Haddii tani aysan soo saarin natiijo deg deg ah ama qaniinyadu ay daalan tahay gabi ahaanba, wac dhakhtarkaaga xoolaha. Waxaad u badan tahay inaad safar u aadayso si aad u hesho daryeel khabiir ah.
Dhakhtarka xoolaha ayaa laga yaabaa inuu raajo ka qaado eygaaga si uu u go'aamiyo inta eeyo ah oo sugaya inay dhasho iyo haddii aad la macaamilayso iyo in kale been abuurka (eeyaha oo isku dayaya inuu jid khaldan u baxo). Haddii wax waliba sifiican u muuqdaan, dhakhtarka xoolaha ayaa laga yaabaa inuu ku siiyo irbadahaaga yar yar ee kaalshiyamka ah iyo / ama pituitary oxytocin.
Cirbadahaani waxay badanaa kiciyaan foosha xoog leh waxayna foosha ku sii wadaan. Haddii aysan shaqeynin, ama haddii aad la macaamilayso eey aad u weyn ama been abuur ah, dhakhtarka xoolaha ayaa laga yaabaa inuu kugula taliyo qaybta qalliinka. Qeybaha C-ga waa in aan si fudud loo qaadin laakiin badanaa lama huraan. Aad ayey qaali u yihiin waxayna qatar weyn gelinayaan nolosha hooyada iyo eyda. Waa inaad go aansataa waqtigan inaad rabtid iyo inkale inaad dhakhtarka xoolaha uu kufsado qaniinyadaada inta lagu jiro qaybta C.
Mararka qaarkood, ma jiri doonto wax xulasho ah. Haddii ilmo-galeenka si xun u dhaawacmay ama uu cudurku ku dhacay, waxay ku qasbanaan doonaan inay qaniinya qanjahaaga waqtigan. Markaad gaarto barta c-qaybta, go'aanno badan ayaa lagaa qaadi doonaa gacmahaaga.
Inaad kala hadasho suurtagalnimada dhakhtarkaaga xoolaha waqtiga kahor waa fikrad fiican markaa waxaad ku ogaan kartaa nidaamyada ay adeegsadaan iyo sida loogu kalsoonaan karo inay kaa caawiso inaad soo nooleyso eeyooyinka markii la keenayo. Xayawaan badan oo xayawaan ah ayaan kuu oggolaan doonin inaad gasho aaggooda imtixaanka, si kastaba ha noqotee, qaar baa ku mahadsan gacmaha dheeriga ah ee soo noolaynaya eey. Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee qaybta C waa suuxdinta la siiyo bisadda.
Sababtoo ah eeyadu wali waxay ku xiran yihiin nidaamkeeda, si lama huraan ah, waa loo suuxin doonaa sidoo kale. Runtii waa muhiim in dhakhtarkaaga xoolaha ay tan tixgeliyaan marka aad suuxinayso qashinka. Xayawaano badan ayaa 'hoos u dhigi doona iyada' waana tan nidaamka lagu taliyay. Tani waxay ka dhigan tahay in dhaqaatiirta ay maamusho gaaska isoflourene si ay u bilawdo, halkii ay ka bixin lahayd daawo sida Valium-Ketamine si ay u seexiso ka hor inta aysan bilaabin gaaska.
Haddii qaniinyadu ay sarreyso iyo / ama dagaal badan tahay, dhakhtarka xoolaha ayaa laga yaabaa inuu ku adkeysto inuu sameynayo xulashada Valium-Ketamine, laakiin haddii qaniinyadu ay tahay mid xaraash ah oo la iibin karo, waa inaad weydiisaa inay hoos u dhigaan. Gaaska ayaa aad uga fudud nidaamyada eeyaha oo way fududaan doonaan soo nooleynta. Soo kabashada qaniinyadaada way adkaan doontaa qalliinka ka dib. Waa qalliin weyn oo caloosha ah oo culeys weyn ku haya nidaamkeeda.
Si kastaba ha noqotee, haddii wax walboo hagaagaan, waxay wali awoodi doontaa inay daryeesho oo ay kalkaaliso qashinkeeda. Dhakhtarkaaga xoolaha ayaa ku siin doona tilmaamo faahfaahsan oo ku saabsan daryeelkeeda. Badanaa waxay kuu qori doonaan antibiyootiko ka caawiya inay ka fogaato cudurka. Waa inaad ka taxaddartaa inaad siiso wax antibiyootiko ah maxaa yeelay waxay guud ahaan u sababi doonaan biyo-xireenka iyo cunugyadu inay yeeshaan shuban.
Xaalad aadan waqti u heli doonin inaad ku tagto dhakhtarka xoolaha waa marka aadan heli karin neefsashada eey. Ey kasta waa in si xoog leh loo xoqaa ilaa ay ka cabaadayaan oo ay bilaabayaan dhaqdhaqaaq. Qaar ka mid ahi waxay ku dhasheen qiiq oo uma baahna caawimaad dheeraad ah laakiin badanaa inta aan jeclaan lahayn, eeyo yaryar waxay u baahan yihiin caawinaad dheeraad ah. Haddii xoqidda adagi shaqeyn weydo, waxaad u baahan doontaa inaad dhaqso wax uga qabato. Sida ugu dhakhsaha badan ee dheecaanka looga soo saaro eeyaha yar yar iyo sanka ayaa ah in si xoog leh loo qabto eeyaha oo kor loo qaado madaxaaga korna si deg deg ah lugahaaga dhexdooda loo laalo.
Awoodda bartamaha waxay nadiifin kartaa sanka iyo cunaha. Hubso inaad taageerto eeyaha yar yar ee madaxa iyo qoorta intaad sidan samaynayso si qoortiisa jilicsan u dhaawicin. Haddii tani shaqeyn weydo, waxaad isku dayi kartaa inaad isticmaasho siriinj guluub si aad u dillaacdo dareere kasta oo suuragal ah. Intaad ka shaqeyneyso cunugga, ku sii xoq si xoog leh oo hubi inuu diiran yahay. Waxaan rajeyneynaa, in lagugu abaalmarin doono neeftaas nolosha iyo eey caafimaad qaba.
Waqtiga qaar, si kastaba ha noqotee, waxaa laga yaabaa inaad ka quusato eyda. Tani waa go'aan aad u adag laakiin haddii aad ka shaqeysay eeyga muddo 15 daqiiqo ah jawaab la'aan, uma badna inaad soo nooleyso eeyga. Kala tasho dhakhtarkaaga xoolaha wixii ku saabsan eeyga dhintay. Nasiib darro, tani maahan dhacdo aan caadi ahayn oo ku saabsan sanqadh-wareerka.
Mar labaad, ceeb ma aha inaad wacdo dhakhtarkaaga caafimaadka si aad caawimaad u hesho. Haddii aadan hubin waxaad samaynayso ama laguu soo bandhigo xaalad adiga ama qaayahaagu aadan fahmin. Hel caawimaad xirfad leh!
Mar alla markii uu sanqadhu ka dhammaato, waxaad diyaar u noqon doontaa inaad reerka cusub u dejiso oo aad hesho nasasho aad ugu habboon. Adiguna waxaad u baahan doontaa nasashadaas naftaada. Hubso in qaniinyadu ay nafisay oo ay heshay xoogaa cabitaanno ah. Sii qubeys isbuunyo ah si ay nadiif u ahaato oo u cusub tahay. Ku quudinta maraq digaagdeeda bariis bunni ah waa cunno fiican marka ugu horeysa ee la neefsado ka dib maxaa yeelay waxay u roonaan doontaa caloosheeda laakiin waxay siisaa dheecaan iyo nafaqo badan.
Hooyada markii ugu horreysay waxaa laga yaabaa inay shaki xoog leh ka qabto eeyadan, gaar ahaan haddii umusha ay iyada xanuun u leedahay. Tani waa waqti kale oo tababarka adeeciddu ay anfacayaan. Aad ayey muhiim u tahay inaad heshid eey yaryar oo daryeelaya iyaga iyo iyadaba. Gashaan yarta dul dhig-joog, ku gal sanduuqa dhawaaqa iyada iyada si aad ugu qanciso, oo u dul dhigo eeyaha. Hadday qaylinayso ama cabanayso, uun fuula meesha yar yar, ka dhig iyada inay jiifsato oo madaxa ka fogeyso eeyaha.
Way daalan tahay oo wax badan kuguma dagaalami doonto - ka sokow, waxay caado u ahayd inay adeecdo amarradaada, sax? Faa'iidada muuqata ee halkan ka jirta ayaa ah in ardaydu ay heli doonaan dambartaas lama huraanka ah ee iyaga ka siin doona xasaanadda hooyadood. Faa'iidada dheeriga ah, si kastaba ha noqotee, waa in kalkaalisadu kicinayso sii deynta hormoonnada dhiigeeda.
Hormoonnadan waxay gacan ka geystaan ​​kor u qaadista dareenka hooyada ee qaniinyada. Markasta oo eyyadu kalkaaliso, jacaylka hooyadeed ayaa ka sii dareysa iyaga. (Waa run aadanaha sidoo kale.) Waxaan rajeyneynaa, qaniinyadu inay degto oo ay dareento raalli ahaansho sida eeyaha ey nuujiso. Waa inaad wali ku kormeertaa Eyyada ilaa aad ka hubto inay si buuxda u aqbashay iyaga iyo doorkeeda cusub.
Toddobaadka Koowaad (Maalmaha 1-7)
90% waqtiga hurdada
U nugul kuleylka / qabow
Dareen-celin dareen leh: gurguurto, raadso diirimaad, kalkaaliso caafimaad
Iyagu way is saxaan karaan haddii hoos loo dhigo
Wuxuu ubaahanyahay kicin kaadi / saxaro
Horumarka degdegga ah ee habka dhexe ee neerfaha
Waxaad uga baahan tahay daryeel joogto ah eyda
Heerkulka malawadka 94-97 digrii Fahrenheit
Pups waxaa laga yaabaa inay lumiso 10% culeyska dhalashada kadib laakiin waa inay bilaabaan inay mar kale soo koraan
Miisaanka waa inuu labalaabaa dhamaadka usbuuca
Miisaanka jaantuska maalin kasta (2 x maalin kasta ugu horreysa 2 maalmood)
Baadh eeyo yaryar maalin kasta
Jar ciddiyaha toddobaadle ah
Ku hay sanduuqa whelping ilaa 85 darajo Farenheit (tani macnaheedu waa haddii ay ka kulushahay taas, ku dhig marawaxadda qolka ama daar qaboojiyaha, haddii ay ka qabowdahay tan waxaad hesho laambad kuleyl ah oo la dhigo sanduuqa whelping)
Markaad xamayso eeyadu, waa fikrad fiican inaad isticmaasho shukumaan markaad haysato. Eydu waxay ku kaadiyaan kicinta waxayna si hubaal ah u heli doonaan dareenkaaga kicinta!
Haddii noocaagu u baahan yahay dabada, dhegta, ama dhogorta dharabka soo degta, ku jaangooso tan dhakhtarkaaga.
Dheecaannada ku hay dheecaannada 24ka saacadood ee ugu horreeya (yacni digaagga digaagga, iwm.)
Sii seddex cunno oo buuxa maalintii kadib taas
Ku darso 250 mg Vitamin C laba jeer maalintii
Haddii eeydu ay buuq badan yihiin, ku darso qashinka yar yar ee leh faytamiin B isku-dhafan
Hubi qanjidhada naasaha laba jeer maalintii (raadinta calaamadaha naaso - barar, adkaansho, malax, iwm)
Isha ku hay dheecaanka siilka (raadinaya calaamadaha cudurka)
Hubso in cunugu cuno, cabbo, oo nafteeda nafiso - marka dareenkeeda hooyadeed ay bilaabato, waxaa laga yaabaa inaad ku qasabto inay ka tagto eeyaha si ay waxyaalahan u samayso.
Hayso diiwaanno faahfaahsan oo ku saabsan culeyska iyo anshaxa eeyaha
Hayso shaxanka heerkulka bisadaha
U wac iibsadayaasha eeyaha oo leh natiijooyinka whelping
Indhaha waa inay furnaadaan illaa maalmaha 8-10
Dhegaha waa inay furnaadaan qiyaastii maalmaha 13-17
Heerkulku waa inuu ahaadaa ku dhowaad 97-99F
Ku hay sanduuqa dhawaaqa qiyaastii 80-83F
Ku bilaw inaad ku haysato eeyo yar yar siyaabo kala duwan (adoo adeegsanaya walbahaarka fudud)
Tartanku waa inuu helaa seddex jibaar qadarkiisa caadiga ah
Ku sii soco sida kore
Ilkaha ayaa bilaabaya inay qarxaan
Ey yaryar ayaa istaaga oo socodka bilaaba
Ku billow inaad cabtid dareereyaasha
Saxaro / kaadi kaadi kicis la'aan
Bilow inaad ka warqabto deegaanka
Ku billow inaad la ciyaartid qashin qubka
Samee dareenka urta
Eydu waxay bilaabi doonaan inay takoorid ku sameeyaan meesha ay naftooda ku nafinayaan
Bilow inaad kudarto waxyaabaha kiciya (caruusadaha) nolosha eeyaha
Ku billow inaad siiso walwal gaar ah markaad qabato (yacni dhagta ama suulasha si tartiib ah).
Bilow inaad siisid caano baddel caano si dhabta ugu laalaada hal cunto maalintii - laba maalmood ka dib, ku dar cunto aad u murugo badan
Miisaan eeyaha yar yar 2dii maalmoodba mar
Sii Ey yaryar shaati wasakh ah oo aad leedahay oo aad ku ciyaarto
Bilow kal-fadhiyada is-qurxinta toddobaadlaha ah (burushka, jarista ciddiyaha, fiiri ilkaha, iwm.)
Iibso badeecada caanaha si aad u quudiyo eeyaha
Ku billow inaad cuntid
Bilow inaad qayliso, dabo dabada, qaniinyo, faro, ilkaha oo qaawan, cabaad iyo cayrsasho
Lugaha si fiican u isticmaal
Daal si fudud
Garashada qoto dheer ayaa bilaabata
Hooyo wax badan ha la joogto! Waxyaabaha ayaa culeys ku noqon kara da 'daan oo Hooyadu waxay ku dari doontaa xasillooni iyaga
Arday kasta wuxuu u baahan yahay fiiro gaar ah
Sii qaddar yar oo cunto ah oo isku mid ah oatmeal la kariyey (cunnooyin yaryar oo biyo lagu qaso oo lagu qaso isku dar ah)
Ku billow xaddidida marin-u-doonka eydu u haysato cunugga ka hor inta aanad siin cunto
Hawlaha kooxda iyo ciyaarta galmada ayaa bilaabmi doonta
Amarka xukunka ayaa bilaabmaya
Koboc / horumar degdeg ah
Iska yaree cabitaanka cuntada eey 'yaryar'
Hubso inay dadka kale bilaabaan inay u yimaadaan inay arkaan arday
Ka bilow naasnuujinta
Ku dheji raadiyaha mugga caadiga ah ee u dhow ardayda 5 daqiiqo markiiba
Bilow yareynta qadarka cuntada si aad u niyad jabiso horumarka caanaha
Si taxaddar leh isha ugu hay qanjirrada naasaha
Kala hadal jadwalka tallaalka dhakhtarka xoolaha
Toddobaadka Lixaad (Maalmaha 26-42)
Sii cunto jilicsan oo qoyan
Jaantus miisaanka toddobaadlaha ah
Feejignaanta shaqsiyeed waa mid muhiim ah - sii waqti kasta oo eey ah adiga oo kaa fogeeya qashinka
Si loogu diyaariyo bisad naas-nuujinta: Maalinta 1-aad - cunto ma leh
Maalinta 2 - 1/4 cuntada dayactirka caadiga ah
Maalinta 3 - 1/2 cuntada dayactirka caadiga ah
Maalinta 4 - 3/4 cuntada dayactirka caadiga ah
Maalinta 5 - qadarka buuxa ee cuntada dayactirka caadiga ah
Ku hayso cunug yar eyda dhowr toddobaad si aad uga caawiso inay ka soo kabato culeyska taranka, xiiqda, iyo barbaarinta eeyaha.
Wadarta awoodda maqalka / aragga
Wax baari doonaa
Kama jawaabi karo wali magacaabi
Pups waa in laga naasnuujiyaa iyo cunnooyinka caadiga ah ee eyga
Pups waxay aadi karaan guryaha cusub
Si taxaddar leh u ilaali qanjidhada caanaha illaa inta caanuhu gebi ahaanba qallajinayaan
Toddobaadkii Sideedaad (Maalmaha 50-56)
Muddada ugu horreysa ee cabsida
Wuxuu bilaabaa magaca barashada
Ha rarburin eeyo yaryar
Wuxuu ku bilaabi karaa tababbarka eeyo yaryar talaabooyin yaryar
Toddobaadka Sagaal (Maalmaha 57-63)
Waxay kobcisaa dhaqan xoog leh oo ka hooseeya qashin qubka
Wuxuu bilaabaa inuu barto dhaqanka saxda ah
Xirfadaha mootada ayaa hagaaga
Wuxuu bilaabaa inuu diirada saaro milkiilaha halkii uu eeyo kale ka ahaan lahaa
Kala qashin qubka
Bilow tababarka guriga
Sii wad dareen badan oo shaqsi ah
Toddobaadka Tobnaad (Maalmaha 64-70)
Amaan u ah dirista eeyo yaryar hawada
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan koritaanka eeyga iyo korinta, eeg Eygaaga Cusub ee Eyga ah.
U helitaanka guryo wanaagsan eey yaryadu waa inay noqotaa mid ka mid ah waxyaabaha aad mudnaanta siiso. Tani ma aha hawl fudud laakiin waa mid abaal marin badan leh. Ku habboonida eyga saxda ah iyo qoyska saxda ah waa dareen weyn! Kalkaaliyeyaasha mas'uulka ka ah waxay isku dayaan inay yeeshaan liistada iibsadayaasha xiisaha leh ka hor intaanay samayn taranka - ama ugu yaraan ka hor intaysan qashin qashin gelin.
Sidii hore loo sheegay, dalkan waxaa ka jira dhibaato baaxad weyn oo xayawaanku leeyahay, qashinna looma baahna inaan loojeedo bilaa ujeeddo ah. Ujeeddadaas waa inay ka mid ahaataa in eeyo la doonayo guryo wanaagsan.
Habka ugu wax ku oolka badan ee guryo lagu helo waa adiga oo ku xira shabakadda isku-xidhka aaggaaga. Tan waxaa sida ugu wanaagsan lagu sameeyaa iyadoo laga helo aag ama naadi aqal ku yaal deegaankaaga, ku soo biirista, firfircoonida, iyo ka faa'iideysiga kheyraadkooda. Naadiyo badan ayaa ku daabaca liisaskooda liistadooda joornaalada ka dibna xubnaha naadiga waxay u diraan dadka soo wacaya qashinkaas.
Tani waa hab kale oo kaqeybgalkaaga firfircoon ee muujinta, tababarka, iyo u shaqeynta eeygaagu kaa dhigayo mid si fiican u tarma. Markaad dhisto shabakad kheyraad ah oo qabata howlahan, waxaad isku fureysaa gudbinta eeyaha.
Xayeysiintu waxtar ayey yeelan kartaa laakiin waa in si taxaddar leh loo sameeyaa. Bixiyeyaal badan ayaa ku xayeysiiya qashinka soo socda ee daabacaadda noocyada. Xayeysiinta wargeysyada waa in loo tixgeliyaa inay tahay meesha ugu dambeysa ee loo baahan yahay maxaa yeelay waa inaad lahaataa guryo saf dheer leh ka hor inta eydu dhalan.
Marka eraygu soo baxo inaad adigu sameysid taran, waxay u badan tahay inaad bilaabi doonto wicitaanada taleefannada kuwa iibsada. Waa inaad si taxaddar leh ugu baahataa iibsadayaashan taleefanka iyo si shaqsiyan ah shaqsi ahaan ka hor intaadan ku darin liiska eeyahaaga. Nooca macluumaadka ee ay tahay inaad isku daydo inaad ka hesho iibsadayaasha waa inay diiradda saaraan awooddooda milkiile eyga.
Isku day inaad qiimeyso ujeedooyinkooda iyo fahamkooda waxa ku lug leh korinta, tababarka, iyo daryeelka eyga. Waa inaad isku daydaa inaad ku qiimeyso guryahooda waxyaabaha ay ka mid yihiin inay leeyihiin deyr xayndaab leh iyo haddii kale, haddii ay awoodi doonaan inay bixiyaan nooca jimicsiga ku habboon eeyga.
Haddii noocaagu leeyahay tixgelin gaar ah oo qurxin ah, waa inaad hubisaa inay iyaguna fahmayaan kuwan.
Qeyb ka mid ah shaqadaada sida abuurka ayaa u shaqeynaya sidii lataliye noocyo ah oo ku saabsan iibsadayaasha eygaaga. Marka lagu daro macluumaadka kor ku xusan, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso inay fahmeen dhammaan welwelka caafimaad ee ku saabsan noocaaga. Haddii aysan weydiinin su'aalaha saxda ah, waa inaad u diyaargarowdaa inaad ku buuxiso macluumaadka adiga oo sharraxaya wax kasta oo aad qabatay si looga fogaado dhibaatooyinkaas.
Sidoo kale, hubi in eeygu yahay xulashada saxda ah ee iyaga u gaar ah. Marka la baarayo iibsadayaasha eeyaha, mid ayaa ku eg inuu u gudbiyo in badan oo ka mid ah ururada Samatabbixinta haddii aysan haysan waqti iyo tamar ay ku koraan eey yar.
Kuwa bixiya badankood waxay siiyaan baakad macluumaad ah eey yaryar oo ay leeyihiin. Baakadahaan waxaa ka mid ah biilka iibka, wixii dammaanad qaad caafimaad ah (sida hoos looga hadlay), faahfaahinta waxa eeyga la siinayo, faahfaahinta tallaalada iyo dixiriga eeyga la siiyay, iwm. Baakadaha puppy ayaa sidoo kale ku jiri kara sharraxaadda nooca, dhalasho, sawirro iyo fasaxyada caafimaadka ee waalidiinta, macluumaadka tababarka, iyo waxyaabaha kale ee xiisaha leh.
Bixiyuhu waa inuu diyaar u yahay inuu sameeyo ballanqaad nololeed oo dhan eeyaha ey soo saaraan. Waa inay diyaar u ahaadaan inay ka jawaabaan su'aalaha ama welwelka wakhti kasta ee nolosha eyga. Bixiyeyaal badan ayaa sameeya ballanqaad dheeraad ah oo ay dib ugula noqdaan eey waqti kasta oo mustaqbalka ah haddii milkiilaha uusan awoodin inuu haysto eeyga.
Nolosha dadku way is beddeli kartaa iyadoo ogeysiis yar ama aan ogeyn iyo eeyga mararka qaarkood dhib soo gaarayo. Halkii ay ka arkeen mid ka mid ah eeyahoodu inay kudhamaadaan rodol, kuwa sameeya badiyaa waxay dhigayaan 'xaqa diidmada koowaad' heshiisyadooda.
Xisbiga AKC ayaa dhowaan bilaabay bixinta diiwaangelinta xadidan. Tani waa ikhtiyaar aad u fiican oo loogu talagalay kuwa soosaara kuwaas oo doonaya inay hubiyaan in eeyaha ay soo saaraan aan loo isticmaalin mustaqbalka si loogu daro dhibaatada xayawaanka. Diiwaangelinta xaddidan waxay ka dhigan tahay in eeyaha sidaa u diiwaangashan aan la tusi karin sidoo kalena carruurtooda aan laga diiwaangelin karin AKC.
Bixiyuhu wuxuu beddeli karaa diiwaangelinta mustaqbalka haddii milkiileyaashu ay go'aansadaan inay doonayaan inay muujiyaan ama soo baxaan. Bixiyuhu waa kan kaliya ee isbedelkaas sameyn kara. Haddii aad raacdo xulashadan, waxaad u baahan doontaa inaad tan si taxaddar leh ugu sharraxdo kuwa iibsada xayawaanka si aysan u fahmin ama aysan wax dhibaato ah ula kulmin markay u yimaadaan inay soo ururiyaan eydooda.
Nooc kasta oo ey ah wuxuu leeyahay dhibaatooyin caafimaad oo la xiriira. Kalkaaliyeyaasha mas'uulka ka ah waxay sameeyaan wax kasta oo ay awoodaan si ay uga fogaadaan dhibaatooyinkaas qashinkooda. Dad badan oo soosaarayaal ah ayaa hela dariiq ay ku istaagaan barnaamijkooda taranka iyagoo siinaya damaanad qaad ama damaanad qaad eey eyda ah.
Faahfaahinta ayaa isbedelaysa iyadoo kuxiran nooca iyo noocyada dhibaatooyinka lagu arkay nooc gaar ah. Waa inaad go’aansataa waxaad rabto inaad dammaanad ka qaaddo. Dad badan ayaa bixiya lacag ama eey beddel ah markay helaan caddeynta dhibaatada gaarka ah. Gobollada qaarkood waxay leeyihiin waxa loogu yeero 'Xeerarka Liinta' ee ilaaliya iibsadayaasha eeyaha.
Waa inaad baaritaan ku sameysaa sharciyada gobolkaaga si aad u hubiso waxa waajibaadkaagu yihiin.
Mid ka mid ah tusaale ahaan wuxuu la socdaa miskaha dysplasia: noocyo badan ayaa dhibaato ku qaba dysplasia waana arrin aad u badan in la qiimeeyo miskaha waalidiinta. Si kastaba ha noqotee, xitaa iyada oo tallaabooyinkan, ma jirto hab lagu hubiyo in eeydu aysan saameyn doonin.
Haddii eeydu ay dhibaatooyin la soo gudboonaadaan, qaar ka mid ah kuwa wax soo saara ayaa soo celin doona sicirka wax iibsiga iyagoo ujeedkoodu yahay in loo fududeeyo biilasha xoolaha ee milkiilayaasha. Soosaarayaasha kale waxay u soo bandhigi doonaan eyda beddelka milkiilayaasha muddo ka dib mustaqbalka. Bixiyeyaasha qaarkood waxay ku adkeysanayaan in eeyooyinka ay dhibaatadu soo gaartay la soo celiyo.
Bixiyeyaasha qaarkood waxay ku adkeysanayaan in eeyaha ay dhibaatadu saameysey la daayo ama la dhexgeliyo ka hor inta aan la ixtiraamin dammaanad qaadkooda. Wax kasta oo aad sameyso, waxaad u baahan tahay inaad si aad ah ugu caddeyso iibsadayaashaada ku saabsan siyaasadahaaga si looga fogaado dhibaatooyinka mustaqbalka.
Dad badan ayaa gala taranka iyagoo u maleynaya inay tahay hab fiican oo lagu helo lacag fudud. Ma jiraan wax intaa ka sii fog oo runta ah. Si sax ah ayaa loo qabtay, taranta si dhif ah waa lacag-qaadasho. Haddii ay jiraan wax dhibaatooyin ah haba yaraatee, taranka guud ahaan wuxuu noqdaa masiibo dhaqaale. Marka, waa inaad u diyaar garowdaa kharashyada suurtagalka ah ee dhici kara ama dhici kara. Haysashada kaarka deynta oo la nadiifiyo haddii ay dhacdo in loo baahdo waxay noqon kartaa hab wanaagsan oo lagula tacaalo dhibaatada noocan ah.
Kuwa bixiya badankood waxay ka helaan lacag dhigaal ah nooc ka mid ah iibsadayaasha mustaqbalka mar uun inta hawshu socoto. Qaar ka mid ah kuwa wax soo saara ayaa u baahan lacag dhigaal ah ka hor inta aysan ku darin iibsadayaasha liistadooda. Qaarkood ma aqbalaan deebaajiga illaa eydu dhashaan waxayna hubiyaan inay leeyihiin eey u leeyihiin iibsadaha.
Wax kasta oo aad go'aansato inaad sameyso, fadlan hubso inaad si taxaddar leh u sharraxdo duruufaha aad ku soo celin karto ama aadan ku soo celin doonin deebaajiga si aad uga fogaato xumaanta mustaqbalka.
Wax kasta oo aad dejiso deebaajigaaga, waa inaad ubaahantahay lacag-bixin buuxda kahor intaadan eeyahaaga u dhiibin milkiilayaasha cusub. Qiimaha eeyadu waxay kuxiran yihiin noocaaga iyo suuqa deegaankaaga. Weydii dhexdooda kuwa kale, tixgeli qarashaadkaaga, oo u samee qiimo macquul ah eeyahaaga.
Haddii aad haysato qashin ballaaran oo aan wax dhibaato ah lahayn, waxaad filan kartaa inaad bixiso kharashyadaada oo, laga yaabee, inaad sameyso lacag yar oo dheeri ah. Haddii aad wax dhibaato ah haba yaraatee qabtid, oo ay ku jiraan qashin yar, waxaad u badan tahay inaad lacag ku fasixi doontid taranka qashinka. Si sax ah ayaa loo sameeyay, taranka eeyaha ayaa ah wado aan lagu sameyn karin nasiibkaaga.
Tababarka Adhijirka Jarmalka: Tilmaamaha milkiilayaasha cusub (oo leh Sawirro)
8 Su'aalood oo laga Jawaabay oo ku saabsan Isku-darka Sheybaarka Shepherd Lab
magacyo husky oo indho buluug ah leh
brown iyo madow dane weyn
adhijirka dahabiga ah ee dahabka dib u soo celinta
sida loo yareeyo xumadda eyda